အလျားလိုက် အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ပြားများ တပ်ဆင်ရန် ညွှန်ကြားချက်များ-Jinan Zhengtang Insulation Insulation Insulation ပစ္စည်း Co.Ltd
အလျားလိုက် အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ပြားများ တပ်ဆင်ရန် ညွှန်ကြားချက်များ
၁။ အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ ဆန်ဒဝစ်ခ် ပန်နယ်လ်တွေနဲ့ ကွန်တိန်နာ ပရိုဖိုင်ပြားတွေမှာ လမ်းညွှန်ကြီးနဲ့ မော့ခ်ပွင့်ကြီးတွေ သယ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်။
၂. ဆန်ဒဝစ်ခ်ျ ပန်နယ်လ်တွေထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့အထောက်အကူနဲ့ စတင်ပါ။ ဒြပ်စင်တိုင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးအနေအထားကို ဝိညာဉ်အဆင့်နဲ့ စစ်ဆေးပါ။ ယင်းက မူလဆန်ဒဝစ်ခ်ျအဖွဲ့၏ မှန်ကန်သောအနေအထားကို အရင်းအမြစ်ဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။
သုံး. အဆစ်အားလုံးကို ဆန်ဒဝစ်ခ်ျပြားနဲ့ ရေမလုံတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကပ်ထားတဲ့ ဓာတ်ငွေ့နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဆစ်အားလုံးကို တံဆိပ်ခတ်ပါ။ ရေမလုံတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကပ်ထားတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေကို အစပျိုးပေးတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေထဲမှာ အသုံးချပါ။ ခြေလျင်လျှောက်ခြင်း၊ ဘောင်ကော်လံတွေ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဘောင်တွေ၊ ရက်မတွေနဲ့ ပုလင်းတွေကို တပ်ဆင်ပါ။
၄။ ဆန်ဒဝစ်ခ်ျ ပန်နယ်လ်များ၏ အခြေခံအတန်းတွင် မထည့်မီ အရှေ့ဘက်ရှိ မိုးရေအားလုံးကို လွင့်ပျံ့လွင့်စေနိုင်လောက်အောင် ရှည်လျားသော ချိုင့်ခွက်တစ်ခုဖြင့် တပ်ဆင်ထားရသည်။ ဆန်ဒဝစ်ခ်ျ ပန်နယ်လ်တွေနဲ့ တိကျတဲ့ ချိုးဖိုအင်္ကျီထဲ ထည့်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
၅။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်အလွန်များလာတဲ့အတွက် လူအတော်များများ အသုံးပြုတဲ့အထောက်အကူနဲ့ ဆန်ဒဝစ်ခ်ျ ပန်နယ်လ်တွေကို လှုံ့ဆော်ပေးရပါတယ်။ အိမ်တွင်းအသွင်အပြင်မှ ကာကွယ်ပေးသောရုပ်ရှင်ကို ချည်နှောင်ထားသည်ထက် စောစော ဖယ်ရှားပါ။ အမှိုက် များ ဆီသို့ လုံခြုံ မှု အများဆုံး သေချာ စေရန် နောက်ဆုံး ထုတ်လုပ် မှု ၏ နောက်ဆုံး အတိုင်းအတာ ပေါ်တွင် ဆန်ဒဝစ်ခ်ျ ပန်နယ်လ် များ မှ အိမ်ပြင် - အကာအကွယ် ရုပ်ရှင် ကို ဖယ်ရှား ပါ ။ သို့သော်လည်း ၊ ကာကွယ်ရေး ရုပ်ရှင် ကို ဆန်ဒဝစ်ခ်ျ အဖွဲ့ ၏ ထုတ်လုပ် မှု ရက်စွဲ ၏ သုံး ပတ် အတွင်း ဖယ်ရှား ရ မည် ။